Kooxaha Chelsea iyo Tottenham oo ugaarsanaya goolhaye ka ciyaara horyaalka Premier League – Gool FM
(London) 12 Mar 2020. Kooxaha reer London ee Chelsea iyo Spurs ayaa lagu soo warramayaa inay ugaarsanayaan goolhayaha ka ciyaara horyaalka Premier League kana tirsan naadiga Bournemouth ee Aaron Ramsdale.
Labada kooxood ee Chelsea iyo Tottenham ayaa suuqa ka raadinaya goolhaye cusub, oo ay ku kala bedelaan labadooda goolhaye ee Kepa Arrizabalaga iyo Hugo Lloris inta lagu guda jiro xilli ciyaareedkan.
Wargeyska Daily Mail, ayaa sheegaya in Frank Lampard iyo Jose Mourinho ay labaduba ka fiirsanayaan inay u dhaqaaqan goolhayahan cajiibka ah ee Aaron oo 21-sano jir ah, kaasoo fure u ah kooxda uu hoggaamiyo Eddie Howe.
Ramsdale ayaa ah mid aad loogu baadi goobayo suuqa kala iibsiga xagaagan, waxaana diiradad saaraya kooxaha ka dheela horyaalka Premier League ee Dalka England.
Goolhayaha 21-sano jirka ah ayaa kooxdiisa Bournemouth qaab ciyaareed cajiib ah ku soo bandhigay, taasoo sababtay in kooxo badan ay diiradda saartaan.
Ramsdale ayaa kaliya shabaqiisa gool ka ilaashay afar kulan oo Premier League xilli ciyaareedkan, waxaana laga dhaliyey 44 gool 28 kulan oo uu saftay horyaalka.
Ramsale ayaa yimid Kooxda Bournemouth isagoo ka yimid Naaidga Sheffield United bishii Janaayo sanadkii 2017-kii.